Sei uchida kugadzira zvakanakisisa PR backlinks kunzvimbo yako?
Chinonyanya kukosha mukutsvaga kwekutsvaga injini pasina mubvunzo kunosanganisira kuvaka. Tsvaga injini shandisa backlinks sewebsite yekutarisa zvinokonzera. Izvo zvakanyanyisa kumashure kumashure zvinoratidza nzvimbo yako, mikana yakawanda yekukwirira pamusoro pe SERP iwe unowana. Dofollow backlinks inoita kuti zvive nyore kuneGoogle kusarudza simba rejiji yewebhu uye nzvimbo yayo. Ndicho chikonzero chekuvandudza nzvimbo yako nzvimbo panzvimbo yekutsvaga peji peji uye kutema mamwe mararamiro anotarirwa; iwe unofanirwa kuisa kusimbisa kuWR PR webmasters backlinks.
Nyaya ino pfupi yakagadzirirwa kukuratidza kuti ungawana sei zvakanakisisa PR backlinks kunzvimbo yako. Asi kutanga, regai ndikutsanangurirei chii icho chingaita shure backlinks.
Dofollow backlinks uye basa ravo muchizvarwa chemigwagwa
Dofollow backlinks ndezvekunze kwekunze kubva kune dzimwe nzvimbo dzewebhu dzinotaridzira webhu. Aya mazano anozivikanwawo seasingaverengeki kana kunze kwemasangano. Izvi zvinobvumidza kubvumira kupisa juisi yekubatanidza kubva kune imwe nzvimbo kune imwe. Apo Google bots dziri kutamba nzvimbo yako, havatauri chete nezvemashoko ose asiwo kune zviratidzo zvisiri izvo zvakadai sekunze kwekunze. Kana izvi zvibatanidzwa zvikaitika, tsvagai tsvakurudzo ichaverenga mhepo yakabatana inobva kwavari. Iko-yepamusoro-PR PR-backlinks ichava nemigumisiro inokosha munzira yekutsvaga injini kuona nzvimbo yako.
Ndicho chikonzero kana iwe uchida kugadzira mazano ako, yakachenjera kuisa pfungwa dzako pamusana pekugadzirisa maitiro ako anokubvumira kuvaka. Somugumisiro, hukama hwakakwirira, hukama hwakasimba huchavandudza huwandu hwako hwepamusoro uye husimudza mararamiro ako.
Ndeipi nzira dzekuwana yakakwirira yep backlinks?
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana-siyana dzokuti ungawana sei mazano ekutevedza ku blog yako. Zvisinei, tinoda kungotarisa chete pamusoro peR PR backlinks. Kuzviwana hazvisi nyore nyore sezvaunofunga. Saka ngatikurukurei zvimwe zvakajeka kuti sei uye kupi kunotora dofollow backlinks.
. Iwe unofanirwa kunge uri munhu anoshingaira unoshandiswa kune zvigaro zvemashoko ako uye osiya zvakakosha, zvinyorwa uye zvinonzwisisika mazwi pasi pega imwe neimwe yenyaya hurukuro. Zvisinei, usaedza nguva dzose kuva wekutanga mukukurukurirana kuti urege kutarisa kushungurudza kwa admin. Masangano anzvimbo yakaisvonaka yekusimudzira bhizinesi rako, kugadzira vatsva vatsva uye kuwedzera mukurumbira wako. Pakutanga, iwe unofanirwa kupindura zvidzidzo zvisere kana usina kuwedzera backlinks yako, uye chete ipapo unotanga kuvaka imwe yekugadzirwa kwehupenyu. Zvisinei, iwe haufaniri kuramba uchingoramba uchitsauka.
Unogona kukurudzira bhizinesi rako nekusvika kune dzimwe nhengo dzeblogi dzakabatana uye regai vaongorore maitirwo enyu kana mabasa. Saka, kutanga kwezvose, unoda kuwana mabhogi akakodzera kuti uite hukama hunobatanidza hunoita kuti iwe urwe nemugwagwa. Itai zvigadzirwa zvakakosha chete kune ma blogger. Kana zvisina kudaro, uri kutengesa kukudziridza mafungiro asina kunaka emukiti wako. Zvadaro tsvaga nzira yekukurukura neva blogger. Sezvo mutemo, nzvimbo iyo mashoko avo ekukurukura mumusoro weblogi ravo. Iwe unogona kunyora email kana kuonana naye naye kuburikidza neInternIn. Kana iwe ukawana mhinduro yakanaka, inguva yekuisa zvigadzirwa zvako. Iwe unofanirwa kusarudza zvinhu zvakanakisisa zvinogadzirwa iwe unofanirwa kuumba kukosha kwakakwana kwechikwata chako Source .